आइजा महापुरुष सक्छस भने मलाई बलात्कार गर – को हुन् यी महिला किन यस्तो माग गरिन? – Enepal Khabar
आइजा महापुरुष सक्छस भने मलाई बलात्कार गर – को हुन् यी महिला किन यस्तो माग गरिन?
यी पुरुषवादी समाज जहाँ जातीयताको ठुलो युद्ध चल्छ, जहाँ महिला हिंसाको लागि प्रतिस्पर्धा चल्छ, जहाँ दिन रात जुवातासको अड्डा बस्छ । यी पुरुषहरूको लागि कसले दिने सतबुद्धी ? छिट्टै पलाओस बुद्धी नत्र आईजा मलाई सक्छस भने बलात्कार गर । – माया खत्री, जाजरकोट
२५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १३:४७ मा प्रकाशित